Hlala beshayela Ubuyisé ngawe ku lottery real: Stop - abayeki, ngeke kahle - hhayi wahlawuliswa kukhona utshwala egazini - kade sasibhekana. Futhi zonke ngoba awunawo breathalyzer, okwakuyoholela baye basikisela uma ungathola beshayela. Kodwa lokushayela ephuzile - liphinde ingozi enkulu. ukuphendula kahle nge mille igazi - kuba njalo impendulo kancane. Futhi ukuphela kungase kube ingozi. Yingakho "Steeles Iqembu" incoma ngokukhetha izinga lotshwala. Lapha, ngokwesibonelo, "AlkostopPro".
Le divayisi ihlanganisa eziningi imisebenzi ewusizo futhi okusezingeni eliphezulu nesilinganiso ukunemba. Breathalyzer "Alkostop Pro" ifakwe ezimbili LCD-ekhombisa elikhanyayo, omunye elibonisa isikhathi samanje, kanti eyesibili - imiphumela nesilinganiso. Iyashesha ukuzwela Semiconductor inzwa ivumela ukuthola imiphumela ezinokwethenjelwa ngisho ukucacisa lokuhlushwa kulencane utshwala ku evala iyaphuma emoyeni. Le divayisi compact futhi kusebenziseka kalula ifakwe izici ezifana ewusizo: iwashi, iwashi le-alamu, izinga lokushisa kanye timer. It has a interface yomsebenzisi elula, ngakho-ke kulula kakhulu ukuyisebenzisa.
Uma ngezinye izikhathi uphuza utshwala, i umhloli utshwala kuyoba ukuthenga ephelele. Phela, cishe nawe uzobe bajabula ngokukhululwa yokuthi amaphoyisa womgwaqo ngeke kahle wena inani elilingana cishe ingxenye yesine kwabaneminyaka izindleko imoto, noma ngisho dla, futhi ngaphezu ziyolahlekelwa amalungelo akho isikhathi ehloniphekile isikhathi (kufika ku iminyaka engu-10 - uma kathathu phakathi nonyaka yonkana traffic amaphoyisa odakiwe). Nokho, uma kuphela kubiza le - zimbi kakhulu, uma ukuba "ngaphansi sezulu", abagogekile noma ukuphuca izimpilo zabanye abantu.
Izinzuzo esemqoka breathalyzers "Alkostop Pro" ungabahlukanisa kulula ukusebenzisa, imiphumela olunembile kakhulu nesivinini of umkhiqizo wabo, isikhathi eside kusukela ibhethri, kanye othile ngemali ephansi. Ubukhulu Compact vumela igcina idivayisi ephaketheni lakho, esikhwameni noma igilavu gumbi ka imoto - ngakho-ke kuyohlale kutholakale kalula.
Inqubo yokuhlola ilula: udinga kuphela uvule idivayisi, ulinde imizuzwana embalwa kuze ukuhlaziywa pass inzwa (uma kunesidingo ukuze ulinganise idivayisi ubonisa umlayezo), khona-ke sengidonsa umoya bese exhale for 3-5 imizuzwana kunzwa. Emva kwesikhatsi lesitsite breathalyzer sihlaziye indlela yokwakheka emoyeni ngamakhala futhi evala kuzoholela esikrinini. Phinda ukuhlolwa kungenziwa akukho ngaphambili komzuzu - okungukuthi kudingeka ukuthi singakanani isikhathi gauge ohlanziwe futhi weza operation.
Ukusebenzisa breathalyzer professional "Alkostop Pro", wena ungazivikela kanjani nabanye ezingozini. Khumbula ukuthi uma ngesikhathi ukuhlola usutholile ngisho emakamu ubuncane utshwala ku evala iyaphuma umoya, hlala ngemuva kwesondo noma kunjalo engenakwenzeka. Inani kancane utshwala ngokweqile kungabangela ukwehla umsebenzi ubuchopho futhi kokuthikamezeka okwamanje ezibucayi obungaholela ikhomishana yengozi. Ngakho-ke, ukulawula ngokwakho usebenzisa breathalyzer - futhi uzoba ephephile endleleni.
Thengisa konke Yamadivayisi
Ukuthenga isikhungo "Palladium" ePrague: ikheli, amahora zokusebenzela, izithombe kanye nokubuyekeza
Aventura yezitolo - konke yezitolo nokuzijabulisa
Izikhungo zokuthenga Surgut: incazelo
Master class "Indlela Dweba Masha kanye Bear"
Yiziphi izimpawu mumps ezinganeni okudingeka ayazi?
Ummbila ku-microwave: esheshayo futhi esihlwabusayo
Iyini indima kwesibindi emzimbeni womuntu? Iqhaza kwesibindi ngo inqubo ukugaya
Hyundai Tiburon - imoto yezemidlalo kubalandeli isivinini
Portugal: izibuyekezo iholide